musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Lufthansa Boka: 100% girini magetsi mumisika yekumba
Airlines • nhandare yendege • Austria Kuputsa Nhau • Belgium Kupwanya Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Germany Kuputsa Nhau • nhau • Kutarisirwa • Switzerland Kuputsa Nhau • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kubva kutanga kwegore, Lufthansa Boka raingotenga magetsi akasvibira kuGerman, Austria, Switzerland neBelgium. Kusvika parizvino, Lufthansa yawana zvitupa zvemagetsi zvakasvibirira, zvinovimbisa kugadzirwa kwemagetsi matsva kubva kuzvirimwa zvemagetsi zvitsva, nokudaro zvichipa mukuwedzera kwesimba rinowedzerwazve.
Sezvo mamwe matanho, iro Boka rinotarisira kusvika CO2-kwazvakarerekera kufamba pasi mumisika yayo yekumba na2030. Pakati pezvimwe zvinhu, kambani iri kuisa mari mukuwedzera kwenzvimbo dzekuchaja dzemotokari dzemagetsi, nekudaro ichitsigira vashandi vayo kuti vaende kunoshanda nenzira inochengetedza zvakatipoteredza. Mamaneja anorendesa mota yemagetsi chete vanowana mari yekuwedzera yekufambisa.
The Lufthansa Boka inotarisawo pakushandisa simba pamwe nekuchengetedza zviwanikwa kana uchironga, kugadzirisa nekuvaka zvivakwa. Chibhakera mune yakaderera-simba pfungwa ndiyo Lufthansa Aviation Center paFrankfurt Airport: mu2009 yaive imwe yezvivakwa zvine simba shoma kuGerman uye kubvira ipapo yakachengetedza mubairo we "Green Building".
Sangano reLufthansa Boka rezvemamiriro ekunze rinoramba rakatarira mukuwedzera zvine mutsindo kugona kwehupenyu mukushanda kwendege, kunyanya nekudyara mabhirioni mune dzanhasi nedzakadzika ndege dzinoburitsa.